Dekadda Hobyo oo xarigga laga jaray | KEYDMEDIA ONLINE
Munaasibad xarigga looga jaraayay dekeddan ayaa waxaa ka qeyb galay, Kusimaha madaxweynaha Galmudug, ahna madaxwene ku xigeenka Cali Daahir Ciid, Wasiirka dekadaha iyo kaluumeysiga Galmudug Saabir Nuur Shuuriye, xubno ka tirsan maamulka Galmudug, ganacsato iyo musuulin ka socday Taliyaaniga iyo Hay'ada WFP.
HOBYO, Soomaaliya - Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug, Cali Daahir Ciid ayaa xariga ka jaray dekadda kalluumeysiga Hobyo. Dhismaha dekeddan waxaa iska kaashtay maamulka Galmudug iyo Hay'adda WFP oo ay taageero maaliyadeed ka helaysay Dowladda Talyaaniga.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid, ayaa ku tilmaamay dekaddan inay muhiim u tahay Galmudug, islamarkaana ay ka faa’iideysan doonaan bulshada iyo ganacsatada kala soo dagi doona waxyaabaha ay soo dhoofsanayaan. Mashruucan ayaa sare u qaadidoona ka faa'iideysiga wax soo saarka kheyraadka badda, wuxuuna abuurayaa fursado shaqo.
Bartamaha sannakii tagay ee 2020, ayaa la daah furay mashruuca dhismaha dekadda Hobyo ee gobolka Mudug. Dekedda ayaa ahmiyad gaar ah u leh gobollada dhaca bartamaha Soomaaliya, waxaana mashruuca xarig jarkeeda uu yahay mid in badan ay dadka deegaanku sugayeen.